HTC One A9 သည် iPhone6နှင့်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်ဆင်တူသည် Androidsis
HTC မှထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုသည်ဤစမတ်ဖုန်းအားကုမ္ပဏီအားပြန်လည်နေရာချထားရန်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အလှည့်အပြောင်းဖြစ်နေသည်။ HTC အနေဖြင့်ရောင်းအားသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည် ထောင်နှင့်ချီသောအလုပ်သမားများ ပြီးတော့မိုဘိုင်းကဏ္inမှာအပြိုင်အဆိုင်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်သင်တန်းအသစ်ကိုယူမယ်။
El HTC One ကို A9တရုတ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ၏အနာဂတ်စက်ယန္တရားကိုဤသို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်မျှော်လင့်ချက်ယူဆောင်လာစေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပါက၎င်းသည် high-end terminal လား၊ မဟုတ်သည်စသည်တို့ကိုခန့်မှန်းမှုများစွာရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤမိုဘိုင်းဖုန်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်များစွာရှိသည်။ မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမလား
ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ HTC One A9 မှာနာမည်ကျော်နည်းပညာကဏ္ Hy ရဲ့ "Hype" ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်မြင်ချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးသူ့ကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကတွေ့ခဲ့ရပါတယ် filtration ၏ပုံစံ၌တည်၏။ အတိအကျပြောရရင်ဒီနေ့ငါတို့ပြောမယ့်နောက်ထပ်ယိုစိမ့်မှုတစ်ခုအကြောင်းနှင့်အနာဂတ်ပုံရိပ်ကိုမကြာသေးမီကပေါ်ထွက်လာပြီး၎င်းသည်ရရှိနိုင်မည့်အရောင်အမျိုးမျိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြသည်။
HTC One A9 နှင့်၎င်းသည် iPhone6နှင့်ဆင်တူသည်
တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများသည်သူတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်အက်ပဲလ် terminal နှင့်ဆင်တူပြီး၎င်းတို့၏ terminal များကိုမည်သို့ထုတ်လုပ်သည်ကိုတွေ့ရသည်မှာထုံးစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် iPhone6။ ဤအရာအားလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးရယ်စရာကောင်းသည်မှာကုမ္ပဏီများသည်မည်မျှကျော်ကြားသည်ကိုကြည့်။ ဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ အနိမ့်အာရုံကို device ကို၏ဒီဇိုင်း။ သို့သော်မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူမိုဘိုင်းကဏ္inတွင်စုစည်းထားသောကုမ္ပဏီ HTC သည် Apple terminal နှင့်အလွန်ဆင်တူသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ ဆောင်းပါးခေါင်းကိုပြသောပုံတွင် HTC ကိရိယာအသစ်ရှိမည့်အရောင်အမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် HTC One A9 ၏အရောင်များသည် - ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်နီ၊ မီးခိုးရောင်၊ နှင်းဆီနှင့်သံမဏိ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုဘေးဖယ်ထားပြီး၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့သွားပါကယိုစိမ့်မှုမှန်လျှင်အသစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ HTC One A9 သည်အလယ်အလတ်ရှိသောစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ကိုရှာပါ ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားသော resolution (1920 x 1080 pixels) နှင့်အတူ။ အတွင်းပိုင်းမှာ Processor တစ်ခုကိုတွေ့တယ် Snapdragon 617 Qualcomm နှင့်ထုတ်လုပ်သည်2GB RAM မှတ်ဉာဏ်။ ၎င်း၏ဓာတ်ပုံအပိုင်းတွင်၎င်း၏အဓိကကင်မရာနှင့်နောက်ဖက်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည် ၅ megapixelsရှေ့ကင်မရာက5MP ပါ။ ၎င်း၏သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 16 GB ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်လက်ဗွေဆင်ဆာနှင့်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
HTC သည်ဤ terminal ပေါ်တွင်များစွာမှီခိုနေပြီးရောင်းအားသည်အလုပ်လုပ်မလား၊ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီသည် One A9 ကိုတရားဝင်ကြေငြာရန်ကုမ္ပဏီကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်ရုံမျှသာမက terminal နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိရလိမ့်မည်။ တဖန်သင်တို့က, ဤ HTC terminal ကိုသင်ဘယ်လိုထင်လဲ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC One A9 ကိုအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်စစ်ထုတ်ပြီး iPhone6နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်
Mi Mobile, Xiaomi သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် OMV ကိုတင်ဆက်သည်